Pramiracetam poids (68497-62-1) hplc≥XUMX% | AASraw Nootropics
/ Products / Nootropics vovoka / Pramiracetam poids
SKU: 68497-62-1. Sokajy: Nootropics vovoka
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny vokatra avy amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny Pramiracetam (68497-62-1), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Vovonan'ny Pramiracetam dia raketin'ny racetam synthetic ho an'ny tanjon'ny fampitomboana kognitika, miaraka amin'ny porofo mialoha mba hanohanana ny fampiasana azy amin'ny fanampiana ny famolavolana fahatsiarovana maharitra. Na dia tsy fantatra mazava aza ireo rafitra, dia mety hampivelatra ny fampiasana acetylcholine izy io.
Lahatsary vovoka Pramiracetam
Raw Pramiracetam karazan-tsoratra fototra
Name: Vovonan'ny Pramiracetam
Formula Molecular: C14H27N3O2
Meny fitetezana 269.38
Raw Pramiracetam vovoka ao amin'ny tsingerin'ny rongony SMART
Coluracetam (MKC-231) dia fanafody racetam voatondro ho zava-mahadomelina mampihetsi-po. Afaka mitahiry ny tsenan'ny choline ho lasa ny neurônina raha toa ka tsy voavaha ny olana, fa amin'izao fotoana izao dia tsy misy porofo ho an'ny fiantraikan'ny tsy misy herotra.
Amin'izao fotoana izao, ny porofo mampiasa ny vovony Pramiracetam amin'ny olona dia mampiasa 400mg telo isan'andro na 600mg isan'andro isan'andro; Samy miady ny 1,200mg avy amin'ny pilaminana Pramiracetam isan'andro ireo roa ireo.
Tsy azo antoka raha tokony horaisina amin'ny sakafo ny vovoka Pramiracetam, ary tsy mazava raha 1,200mg ny dosie tsara na tsia. Izany anefa dia toa mahomby.
Inona avy ireo karazana vokatra tokony hojereko avy amin'ny vovonam-bovoka Pramiracetam
Ny vovonan'ny Pramiracetam dia manatsara ny fahombiazan'ny atidoha ary manome fanatsarana ny môtô marika, indrindra mikasika ny fanabeazana sy fitadiavana fahatsiarovana.
Satria matetika no miteraka fihetseham-po mahavariana miaraka amina toe-javatra marobe mampihetsi-po, dia matetika ampitahaina amin'i Ritalin izany. Ny sasany amin'ireo tombontsoa be mpahalala avy amin'ny vovobony Pramiracetam dia toy izao manaraka izao:
Fahatsiarovana tsaratsara - Noho ny fanentanana ny hippocampus, ny ampahany amin'ny atidoha dia tompon'andraikitra voalohany amin'ny famoronana ny fahatsiarovana vaovao, fantatra amin'ny anarana ho fampiroboroboana fahatsiarovan-tena ny Pramiracetam. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mitatitra ny fanatsarana manan-danja amin'ny famolavolana fahatsiarovantena sy ny haavon'ny fahatsiarovan-tena, fanambarana iray izay nohamarinin'ny fianarana biby.
Fampianarana Mivoatra Expanded - Ny mpampiasa dia mitatitra fa ny poety Pramiracetam dia mahatonga ny fianarana ho mora kokoa, mora kokoa ary mahafinaritra kokoa. Izany dia azo hazavaina farafaharatsiny amin'ny ampahany amin'ny fanamafisana ny pneoma Pramiracetam ho an'ny neuroplasticity.
Fahasalamana ara-tsaina sy fahamendrehana - Matetika ny mpampiasa dia mitatitra fa ny fanaovana ny vovony Pramiracetam dia manome azy ireo fahatsapana mahery vaika amin'ny fahamalinana ara-tsaina, mifantoka, ny fanabeazana haingana ary ny fisainana mazava.
Vahaolana ara-tsosialy - Mpampiasa marobe no milaza fa ny fampiasana vovobony Preamiracetam dia manampy azy ireo hankafy sy handray anjara feno amin'ny toe-draharaha sosialy, tombony izay mety mifandraika amin'ny fahatsaran'ny siramamy ankapobeny, saingy mety ho misy ifandraisany amin'ny vokatra mampihetsi-po izay mampihena ny sosialy fanahiana.
Ny fitombon'ny fahatsapana tsapa - Matetika ny mpampiasa dia mitatitra ny fahatsapana ara-pihetseham-po amam-pihetseham-po, ary tafiditra ao anatin'izany ny fitomboan'ny feo sy ny fisainana mazava kokoa sy ny fomba fijery mazava kokoa amin'ny fomba fijeriny amin'ny endrika mifanohitra kokoa.
Faharetan'ny fahatsiarovan-tena - Tamin'ny fisedrana voafetra voafaritra, ny toeram-pitsaboana Pramiracetam dia aseho ho fitsaboana mahomby amin'ny fahabangana amin'ny fahatsiarovan-tena sy ny olana hafa amin'ny kognita vokatry ny ratra amin'ny ati-doha. Izy io ihany koa dia iray amin'ireo fahasamihafana maro samihafa izay notsapaina tany Etazonia noho ny fitsaboana ny fahavoazana fahatsiarovan-tena mifandraika amin'ny aretin'ny Alzheimer sy ny aretin-tsaina hafa. Nasehon'ny fandinihana iray fa afaka mamadika ny amnesia simika simika amin'ny fahasalamana ara-pahasalamana avy amin'ny 18-65 taona.
Ny fomba fiasan'ny Raw Pramiracetam
Tahaka ny ankamaroan'ny nootropic, ny vovobony Pramiracetam dia misy fiantraikany amin'ny famoahana ireo neurotransmitters, ireo singa ao amin'ny atidoha izay mamindra famantarana avy amin'ny sela nerena ho an'ny hafa. Fa ny vovonan'ny Pramiracetam dia tsy mitongilana, amin'ny fomba tsy mitovy amin'ny fihetsika mahazatra amin'ny fanafody racetam, ary manentana ny atidoha amin'ny fomba hafa ihany koa.
Tsy sahala amin'ny piracetam, Noopept, ary ny maro hafa malaza beotropik, ny vovony menaka Pramiracetam dia tsy matavy be fa tsy rano tsy azo avaozina, izay midika fa atonta ao amin'ny rà mandriaka amin'ny asidra fetsy. Izy io dia mahatratra haavon'ny haavon'ny haavony sy ny bioavailability maimaim-poana haingana, amin'ny ankapobeny ao anatin'ny 30 minitra, ary manana halavam-potoana maharitra ny 4-6 ora.
Ny ankamaroan'ny racetams dia miasa amin'ny alàlan'ny fanentanana mivantana ny tranonkala mpikirakiran'ny neurotransmitter ary mampitombo ny famokarana sy ny famoahana ny neurotransmitter manokana, fa ny vovonan'ny Pramiracetam dia tsy mitarika mivantana ny fiovan'ny neurochemical, ary toa tsy misy fiantraikany amin'ny neurotransmitter lehibe.
Ny fihetsika mivantana voalohany dia fiakaran'ny fihenan'ny kolontsaina avo lenta amin'ny hippocampus, ny ampahany amin'ny atidoha izay tena manan-danja amin'ny fananganana fahatsiarovana maharitra.
Ny Choline dia alain'ny acetylcholine, ny neurotransmitter dia tafiditra lalina amin'ny dingana kognitive, anisan'izany ny fianarana haingana, fahatsiarovana ary fifantohana.
Amin'ny famporisihana ny fikarakarana ny kôlônina, ny vovon-tsakafo Pramiracetam dia manamboatra ny fanafarana acetylcholine amin'ny endriny ary manatsara ny asany amin'ny hippocampus. Noho io ampahany amin'ny ati-doha io dia tena ilaina amin'ny fahatsiarovan-tena, ny fanentanana ankapobeny izay mamorona ny vovonan'ny Pramiracetam dia afaka manatsara ny famolavolana ny fahatsiarovana vaovao sy ny fihazonana ny fahatsiarovan-tena na ny fahatsiarovana maharitra. Ny fampitomboana ny hippocampus koa dia mampitombo ny rà mandriaka, izay mampitombo ny fahamalinana ary manatsara ny fahaiza-manaony amin'ny ankapobeny.
Ny vovon-tsakafo Pramiracetam dia mety manana fomba fiasa hafa koa. Ny mpikaroka dia nihevitra fa ankoatra ny fiantraikany eo amin'ny atidoha, ny vovobony Pramiracetam dia miasa any amin'ny toeram-ponenana ivelan'ny atidoha izay miankina amin'ny loharano adrenaliny. Ny fikarohana biby dia manoro hevitra fa mety hampitombo na hamerina ny fiasan'ny atidoha ao amin'ny atidoha koa ny vovobony Pramiracetam, izay manamora ny famantarana ny sela.
Tsy sahala amin'ny karazam-panafody hafa misy racetam, ny vovon-tsakafo Pramiracetam dia toa tsy manovaova na oviana na oviana ny fahatsapana na ny toe-pihetseham-po. Izany dia azo hazavaina amin'ny fiantraikan'ny taratra Pramiracetam ho an'ny famokarana sy famoahana ireo neurotransmitters izay manana fiantraikany lehibe amin'ny fihetseham-po sy ny tebiteby toy ny serotonine, GABA, ary dopamine.
Ny vovon-tsakafo Pramiracetam dia iray amin'ireo nootropik mahaliana indrindra, izay manome ny heriny lehibe indrindra ho an'ny ampiana racetam-supplement.
Ny hetsika tsy manam-paharoa dia manatsara ny fiasan'ny atidoha manontolo, manatsara ny fahatsiarovan-tena, ny fahaiza-mianatra, ny mifantoka ary ny fahatsapana fahamalinana.
Miasa tsara ho an'ny tenany manokana izy ary mety ho fanampim-panazavana tsy azo ianteherana amin'ny hafa nootropic, manatsara sy manitatra ny vokany.
Vetivety dia lasa mpankasitraka ny mpianatra, mpanoratra, ary izay liana amin'ny fampitomboana ny fahaiza-manaony, dia vaovao amin'ny olona marobe ny vovo-dronono Pramiracetam, fa manomboka mahazo ny fankasitrahana tsara ho toy ny tena tsy mitongilana.
Ny vovonam-behivavy Pramiracetam dia singa manintona ny piracetam, hita sy novolavolain'ny Parke-Davis ao amin'ny 1970. Izy io dia fanampiny fanampiny, azo heverina ho avy amin'ny 5-30x mahery kokoa noho ny piracetam.
Namidy any Eoropa izy io eo ambanin'ny anarana marika Neupramir, Pramistar, ary Remen ary voatendry ao izy io mba hanasitranana ny dyslexia, ADHD, dementia ary ny fahatsiarovan-tena vokatry ny aretin'i Alzheimer sy ny toe-pahasalamana hafa.
Nosoratana tany Etazonia tamin'ny 1979 izy io saingy tsy neken'ny USFDA ho an'ny fampiasana manokana. Na izany aza, dia nodinihina lalina izy io ho fitsaboana mety ho an'ny olan'ny saina sy ny fahatsiarovan-tena mifandraika amin'ny aretin'ny Alzheimer sy ny aretin'ny atidoha. Ampianarina ihany koa izy io ho fitsaboana aretina maro isan-karazany.
Raw Pramiracetam vovoka Marketing
Ny voankazo Raw Pramiracetam dia manana fiantraikany hafa
Ny voankazo Pramiracetam dia matetika mandefitra na dia amin'ny dosage avo aza, ary vitsy dia vitsy ny vokatra hafa no voarakitra.
Ny vokatra faran'izay mahazatra indrindra dia headache, izay matetika azo sakanana amin'ny fampakarana izany amin'ny choline supplement.
Ny tsy fahampian-tsakafo mahazatra, anisan'izany ny fahavoazan'ny gastrointestinal sy ny fahatsapana ny hatairana na ny fisavorovoroana, dia matetika mifandray amin'ny dosage avo dia mety, noho izany, azo alaina amin'ny fampihenana ny dosage.
Ny paompy Pramiracetam dia tsy mampiankin-doha, ary tsy misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fampiasana maharitra ny fampiasana azy. Raha ny marina, misy porofo fa io fanampiny io dia mety hampisy ny fahasalaman'ny atidoha ary amin'ny fepetra amin'ny famerenana amin'ny laoniny.
Ahoana ny hividianana vovony Pramiracetam avy any AASraw
68497-62-1 Vovonam-paty Pramiracetam AASraw HNMR
Nootropic Pramiracetam vovoka: tombony, dosage, vokatra hafa
Asidra N-methyl-D-asparagine (NMDA)
Testosterone phenylpropionate poids